आजको सुनको मूल्य दुइथरी ! किन ? - सिम्रिक खबर
आजको सुनको मूल्य दुइथरी ! किन ?
काठमाडौँ । केही महिनादेखी सुनचाँदीको मूल्य आकाशिने र घट्ने क्रम जारी छ । केही हप्ता अघि त सुन एक लाख नै नाघ्यो । सोमबार स्थिर रहेको सुनको मूल्य आज भने घटेकोे छ । तर नेपालमा सुन बेच्ने दुइ थरी संगठनले फरक फरक मूल्य तोकेका छन् । जसले गर्दा मिडिया देखी सबै नागरिक झुक्किए । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघल लागि छापावाला सुन प्रतितोला ९५ हजार ८०० रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ।
अर्को सुन चाँदीको कारोबार गर्नेको छाता संस्था नेपाल सुन चाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले छापावाला सुनको मूल्य तोलाको ९६ हजार १ सय तोकेको छ। दुई महासंघले तोलामा ३ सय रुपैयाँको फरक राखी भाउ निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण अलमलमा परेका हुन् ।नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले १० देखी साढे १० बजेको विचमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउको आधारमा नेपालमा पनि मूल्य तोकिने गरेको बताए । त्यसैगरी अर्काे महासंघले पनि आफ्नै सुरमा मूल्य तोक्ने गरेको छ ।
्जसको कारण आज दुइ थरी मूल्य देखिएको हो । ब्यबसायीका अनुसार सुनचाँदीको मूल्य ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ । मंगलबार सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँले घटेको छ। चाँदीको भाउ पनि मंगलबार तोलामा १० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला एक हजार ३१० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको भाउमा निरन्तर गिरावट आएको छ।